danna, Qoraaga BikeHike
About the Author: riix
Heerkulka waa in lagu hayaa 75-80 darajo Fahrenheit. Biyaha qabow waxay dili karaan beta, maadaama habka difaaca beta uu hoos u dhici doono oo uu cudurku u nuglayn doono. Biyo kulul
Si tartiib ah u diirri biyaha taangigaaga (xalka ku meel gaadhka ah). Waxa lagu taliyaa oo kaliya sidii xal ku meel gaar ah marka la isku dayayo in haanta kalluunka lagu hayo kuleyl la'aan. Si tartiib tartiib ah ayaad u diirran kartaa
Habka ugu dhaqsaha badan oo si fiican loo yaqaan ee barafaynta kalluunka waa biyo qabow. Kalluunku waa inuu ku jiraa shandad xiran si loo badbaadiyo iyo si loo ilaaliyo dhadhanka, oo lagu dhex qariyo
Ka ilaalinta haanta kalluunka qabow Ka ilaali aquarium-kaaga daaqadaha qoraxda leh oo dhig meel qabow oo qolka ah. Soo qaado dabool haanta si aad uumiga ugu ilaaliyo
Sideed ku aragtaa kalluunka biyaha ku jira? Ka raadi kalluun firfircoon oo ka soo qulqulaya muuqaal kasta oo aan caadi ahayn oo xeebta ah, barar ama soo bixitaan kale oo aad arki karto, sida taxane ah
Habka ugu fudud uguna waxtarka badan ee lagaga saaro koloriin iyo chloramines biyahaaga waa isticmaalka dekloriinta kiimikada. Waxaa jira alaabooyin badan oo loo iibiyo aquarium-ka si gaar ah loogu talagalay
1 2 ... 116,772 Next